Project Manager | Able Winners Co., Ltd. ﻿
3.9.2019, Full time , Service
Company: Able Winners Co., Ltd.
Able Winners Co., Ltd.
•	အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူ၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သူ၊ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊
•	မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Site များသို့သွားရောက် ၍ ကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။
•	AGTI , B .Tech , BE (EP) ဘွဲ့ရ။
•	HT/LT LINE 11KV, 33KV, 66KV လိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သတ်၍အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ကျွမ်းကျင်သူ။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်
Work location ၁၉ / ဘီ၊ သုခ၀တီလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် (ဆီဒိုးနားဟိုတယ် အနောက်ဘက်လမ်း၊ သုခ၀တီ ပန်းခြံအနီး )
•	AP & AR Control, Inventory Control, Bank Reconciliation, Reports များပြုနိုင်ရပါမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။
•	အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး လေ့လာသင်ယူလိုစိတ် ရှိသူ။ •	အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်ရှိသူ၊ •	နယ် Sites များတွင် နေထိုင်နိုင်ရပါမည်။
Electrical Calculation Engineer ( EP )
•	Preparing One Line Drawing, Google Map & Survey Photo That required in Tender’s statement. •	Able to use Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point), Auto CAD. •	Able to travel around Myanmar for Survey (Only sometime).
•	အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူ၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သူ၊ခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊ •	မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ Site များသို့သွားရောက် ၍ ကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။
168 Days, Full time , Service
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်သူ၊ သွက်လက်တက်ကြွစွာ ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ Assistant Business Development Executive (Oil & Gas)
•	Good personality,communication and negotiation skill. •	Able to communicate with all people from an internal or external environment. •	Able to travel according to travel.
•	Good personality,communication and negotiation skill. •	Able to communicate with all people from an internal or external environment.
Estimate Calculation Engineer
Project Manager Project Management Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Able Winners Co., Ltd. Project Management Jobs Project Management Jobs Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Finance & HR Assistant F ( 1)